နေအိမ် » ကာကွယ်မှု » Phineas & Ferb Backyard Defense
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Phineas & Ferb Backyard Defense
ထိန်းချုပ်ရေး: Use mouse to play Phineas & Ferb Backyard Defense Game.
ကစား: 18,398 tag ကို: Phineas & Ferb, Phineas & Ferb games, Phineas Ferb games, Phineas and Ferb games, Phineas games, Ferb games, ကာကွယ်ရေးဂိမ်း, ကာကွယ်ရေးဂိမ်း
phineas နှင့် ferb တောတွင်းစွန့်စားမှု
Phineas နှင့် Ferb သစ်တောမှာသူတို့ရဲ့ဂိမ်းနှင့်အတူလုံခြုံစွာကစားကူညီပါ။
phineas နှင့် ferb အလွန်သေးငယ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ
Phineas နှင့် Ferb ရွှေ့နှင့်ခုန်ဖို့နဲ့ arrow key ကို အသုံးပြု. အားလုံးဒိန်ခဲစုဆောင်းရန် Tiny နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက်စွန့်စားမှုရှိသည်။
phineas နှင့် ferb ပိုမိုမြင့်မားခုန်
သငျသညျအမြင့်ဆုံးခုန်နှင့်ပိုပြီးရမှတ်ရ Phineas နှင့် Ferb ကိုရွေးချယ်ပါ။
phineas နှင့် ferb လျှပ်စီး bug ကို
Phineas, Ferb နှင့်ပယ်ရီသစ်တောကိုသွားနှင့်ပိုးစုန်းကြူးကိုဖမ်း။ သူတို့ကိုအတားအဆီးကိုရှောင်ရှားကိုကူညီပါခုန်ခြင်းနှင့်ပိုးစုန်းကြူးကိုဖမ်း။ တစ်ခုချင်းစီကိုဇာတ်ကောင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခုန်အမြင့်ရှိပါတယ်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာ Intruction
phineas နှင့် ferb ပဟေဠိ
သငျသညျ Phineas နှင့် Ferb ၏ပြီးပြည့်စုံကြီးမားသောရုပ်ပုံဒါကြောင့်ပုံရဲ့အပိုင်းပိုင်းလှန်ရန်သင့် mouse ကိုသုံးနိုင်သည်။